AJ Kieffer's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na AJ Kieffer
AJ ndiye Mutariri Mukuru weKushambadzira Kwechigadzirwa pa kondakita. Kutamisa kubva kusangano revashambadziri, AJ inyanzvi yekushambadzira ine hunyanzvi hwekuvhura uye kumisikidza ruzivo rwevatengi.
Chipiri, February 18, 2020 Chipiri, February 18, 2020 AJ Kieffer
Isu tiri munguva yeruzivo kuwandisa. Nemazuva ano rukova rwe data, kunyangwe mushambadzi wedhijitari akangwara anogona kunzwa kukundwa. Iwe haudi mhinduro kumubvunzo wese - iwe unongoda kiyi yekuvhura kukosha mumakampeni ako uye zvirongwa. Unoda sevhisi yakasarudzika, inowanikwa uye inoshanda. Kuunza Nzira Nyowani dzeKuongorora nekugovana Ruzivo nemikana muKondakita Kutsvaga Mwenje Kondakita iri kufumura suite nyowani yezvinhu zveedu